"Waan Jeclaan Lahaa Inaan Lampard U Ciyaaro" - Daafac Xoogan Oo Chelsea Lala Xidhiidhinayay Oo Jacaylkiisa Blues Qarsan Waayay - Gool24.Net
“Waan Jeclaan Lahaa Inaan Lampard U Ciyaaro” – Daafac Xoogan Oo Chelsea Lala Xidhiidhinayay Oo Jacaylkiisa Blues Qarsan Waayay
Daafaca dhexe ee kooxda Atletico Madrid ee Jose Gimenez ayaa banaanka soo dhigay jacaylka uu mudada dheer usoo qabay kooxda Premier League ee Chelsea oo magaciisa lala xidhiidhinayay toddobaadyadii lasoo dhaafay.
Tababaraha kooxdaas ee Frank Lampard ayaa diyaar u ah inuu xoojiyo safka daafaca ee kooxdiisa oo xilli ciyaareedkii dhawaa 54 gool oo Premier League ah laga soo dhaliyay isla markaana kooxda ka dhigayay mid aan isku dheeli tirnayn.
Saxeexa daafac dhexe ayaa liiska xiddigaha uu doonayo ugu jira Lampard, 25 sano jirka ree Uruguay ayaa leh khibrad weyn oo Champions League isaga oo si joogto ah ula soo ciyaarayay kooxdiisa Atletico iyo tababare Diego Simeone.
Walow Gimenez oo heshiiskiisa Atletico Madrid uu gaadhsiisan yahay ilaa 2023 aan si sahlan lagu heli doonin, haddana hadalada uu hawada mariyay ayaa si cad u sheegaya nooca dareen ee uu u hayo Blues.
Gimenez ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa la shaqaynta iyo kahoos ciyaarista tababare Lampard isaga oo intaas ku daray inuu tan iyo caruurnimadiisii taageere usoo ahaa Chelsea.
Jose Gimenez oo waraysi siinayay bogga rasmiga ah ee horyaalka La Liga ayaa yidhi “Waan jeclaan lahaa inaan Lampard la ciyaaro, markasta waxaan ahaa mid daawada Chelsea aniga oo caruur ah”
Daafacyada dhexe ee lala xidhiidhinayo Chelsea ayuu dhawaan safka hore kasoo galay kabtanka Brighton ee Lewis Dunk kaas oo la sheegayo inay heshiis 40 Milyan oo Pound ah kula soo saxeexan karaan.